Soma (ဆိုမာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Soma (ဆိုမာ)
Soma (ဆိုမာ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Soma (ဆိုမာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Soma (ဆိုမာ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Soma® ဟာကြွက်သားတွေကိုပြေလျော့စေတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောတလျှောက် ဖြတ်သန်းလာတဲ့နာကျင်မှုခံစားချက်တွေကိုပိတ်ဆို့ပေးပါတယ်။ နာကျင်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်းတို့ကဲ့သို့သောကြွက်သားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက် Soma® ဆေးကိုသုံးစွဲတဲ့အပြင်အနားယူခြင်း၊physical therapy နည်းလမ်းအသုံးပြုကုသခြင်းတို့ကိုပါတွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ ဒီအညွှန်းမှာဖော်ပြမထားတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်လည်း Soma® ကိုအသုံးပြုကောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Soma (ဆိုမာ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Soma® (carisoprodol) ကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျသုံးစွဲရပါမယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Soma® ကိုတနေ့သုံးကြိမ်သုံးစွဲနိုင်ပြီးညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှာလည်းသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတော့ဂရုတစိုက်လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုကာလတိုပဲသုံးစွဲသင့်တာကြောင့်ဆရာဝန်မှအထူးတလည်ညွှန်ကြားထားတာမျိုးမရှိရင်၂ – ၃ပတ်လောက်ပဲသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Soma® ဟာစွဲတတ်လို့ပါ။ ဆေးစွဲဖူးသူ၊ဆေးတလွဲသုံးဖူးသူတွေနဲ့ဒီဆေးမသင့်လျော်ပါဘူး။ တခြားသူတွေမမြင်နိုင်၊ယူမသုံးနိုင်တဲ့နေရာမှာဆေးကိုသိမ်းထားပါ။ ဒီဆေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းရောင်းစားခြင်း၊အခြားသူတဦးကိုပေးခြင်းဟာဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပါတယ်။ စွဲလမ်းတတ်စေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတလွဲသုံးခြင်းဟာအန္တရာယ်များပြီးဆေးစွဲခြင်း၊ဆေးလွန်ခြင်း၊သေဆုံးခြင်းတွေအထိ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။Soma® ကိုကာလကြာရှည်သုံးစွဲပြီးတဲ့အခါရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ခြင်းမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ခြင်းဟာဆေးဖြတ်လက္ခဏာတွေကိုပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသုံးစွဲခြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးအန္တရာယ်ကင်းကင်းရပ်ဆိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပါ။Soma® ဟာအနားယူခြင်း၊ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊အခြားသောအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကိုသုံးစွဲခြင်းအစရှိတဲ့နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ပါဝင်တဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်ရဲ့တစိတ်တဒေသသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတသွေမတိမ်းလိုက်နာပါ။
Soma (ဆိုမာ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Soma® (carisoprodol) ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ medication ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Soma® (carisoprodol) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Soma® (carisoprodol) ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Soma® (carisoprodol) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Soma (ဆိုမာ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနေခြင်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်၊နို့တိုက်ချိန်တွေမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပဲသုံးစွဲသင့်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Soma® (carisoprodol) ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်အခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
• အခြားသောနာမကျန်းမှုများ၊ရောဂါပြဿနာများရှိနေခြင်းစတာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သင့်မှာ porphyria ပြဿနာရှိနေရင် (porphyria ဆိုတာကမျိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်ပွားတဲ့အင်ဇိုင်းမ်ပြဿနာတခုဖြစ်ပြီးသင့်အရေပြားနဲ့အာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေ ပြပါတယ်) Soma® ကိုမသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။Carisoprodolဟာစွဲလမ်းစေတတ်တဲ့အတွက်တခြားလူတွေနဲ့မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုရပါဘူး။ ဒီလိုဆေးတွေဟာစွဲလမ်းခြင်း၊ဆေးလွန်ခြင်း ဖြစ်စေတတ်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။Soma ဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့သင့်ရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နိုးကြားတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်တဲ့ ပြုဖွယ်ကိစ္စတွေကို (ဥပမာကားမောင်းခြင်း) ဒီဆေးသုံးစွဲထားစဉ်အချိန်မှာအထူးဂရုစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။Carisoprodolကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငိုက်မျဉ်းထိုင်းမှိုင်းမှုတွေကိုအရက်ကပိုဆိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။Carisoprodolကိုကာလကြာရှည်သုံးစွဲပြီးရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆေးဖြတ်လက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲဆေးရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ ဆေးကိုတိခနဲလုံးဝမဖြတ်လိုက်ခင်ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့သွားရမှာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Soma (ဆိုမာ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Soma (ဆိုမာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ခန္ဓါကိုယ်တွင်း serotonin ပမာဏများပြားခြင်း၏လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာခြင်း – စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ခြင်း၊ကယောင်ကတမ်းများ မြင်၊ကြားခြင်း၊အဖျားတက်ခြင်း၊နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်၏တုံ့ပြန်မှုများလိုသည်ထက်ပိုလာခြင်း၊ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊သတိလစ်ခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အာရုံကြောစနစ်များစည်းချက်ညီညီတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်း။
အင်ပြင်ထခြင်း၊အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ၊လည်ချောင်းဖောရောင်လာခြင်းစတဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာရင်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုချက်ချင်းခံယူရပါမယ်။ ယခုဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်မပါဝင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Soma (ဆိုမာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Soma® (carisoprodol) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Soma® (carisoprodol) နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
Fluoxetine သို့မဟုတ် fluvoxamine
St. John ရွက်။
မှိုစွဲ/ယားနာပြဿနာများတွင်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများ – ketoconazole, voriconazole
အိပ်ဆေးများ- diazepam, alprazolam, lorazepam, Valium, Xanax, and others
အတက်ဝေဒနာအတွက်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများ – carbamazepine, oxcarbazepine
အစာအိမ်မှထွက်ရှိသောအစာချေအက်ဆစ်ရည်ကိုလျော့နည်းစေသောဆေးဝါးများ – esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, Nexium, Prilosec.
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Soma (ဆိုမာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Soma® (carisoprodol) ကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Soma (ဆိုမာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Soma® (carisoprodol) ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။Soma® (carisoprodol) နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
Porphyria ရောဂါရှိခြင်း (porphyria ဆိုတာကမျိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်ပွားတဲ့အင်ဇိုင်းမ်ပြဿနာတခုဖြစ်ပြီးသင့်အရေပြားနဲ့အာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေ ပြပါတယ်)။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Soma (ဆိုမာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကတော့၂၅၀ – ၃၅၀မီလီဂရမ်ကိုတနေ့သုံးကြိမ်နဲ့ညအိပ်ယာဝင်အချိန်တွေမှာသောက်သုံးရပါမယ်။
သုံးစွဲရမယ့်ကာလကတော့၂ – ၃ပတ်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Soma (ဆိုမာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက်သောက်သုံးရန်စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆိုအသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Soma (ဆိုမာ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
oma® (carisoprodol) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Soma® (carisoprodol) ကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 3, 2019
Soma®. https://www.drugs.com/soma.html. Accessed July 7, 2017
Soma®. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-12153/soma-oral/details. Accessed July 7, 2017
မှဲ့သူဌေးလား… ဒါတွေသိထားမှ ဖြစ်မယ်နော်
Osteoarthritis အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ